> Resource > Mac > Mac OS X 10.7 Libaaxa NEW Maqaallo, dhaqdhaqaajinta jirka Multi-Touch
Hadda waxaan oo dhan ayaa waxa uu qiray in ay 250+ muuqaalada cajiib ah oo ku saabsan Mac OS X 10.7 Libaaxa, kuwaas oo dhammaantood sida dhagax lagu tuuray biyo ah, sax? Xoog functional, Apple had iyo jeer ma naga dejisay doonaa waxyaabaha ay caadi aheyn. Hadda waxaan jeclaan lahaa in la sameeyo dib u eegis ah oo ka mid feature cajiib ah oo ka mid ah: Multi-Touch dhaqdhaqaajinta jirka.
Horumarinta iskama daayo, sidaas sameeya guys Apple. Sida macruufka suuragelinayo iDevices (iPhone / iPod / iPad) la heli karo si fudud, waqtigan, Apple ka mid ah qaababka la mid ah Mac, kuwa xijiyaan weyn: multi-taabashada waji ka heli karo hadda la Libaaxa ku rakiban, kaas oo si xaqiiqo ah u keeni doono in aad waayo-aragnimo ah oo deg deg ah ee hawlaha qaar ka mid ah.
Sida macruufka ah, Mac OS X 10.7 Libaaxa halkan ku sameeyaan dadka isticmaala oo dhan markii on Apple kooxda sii joogo. Baaqa Multi-Touch caawiyo in aad qabato hawlo dhan dareen & toos ah, riyaaqayaa jawaabaha tilmaam dheecaan ka badan oo macquul ah sida Apple wuxuu nagu yidhi, boggan caag-band, bogga iyo zoom image, iyo afganbigii screen-buuxa iyo qaar ka mid ah oo kale oo kale.
Si kastaba ha ahaatee, laptops Mac sida MacBook Pro, MacBook Air, tan iyo dabayaaqadii 2008 ayaa horay waxaa ka mid ahaa taageero ay u waji multi-taabashada. Oo waxaa lagu daydo ka hor laga yaabaa in aanay taageero buuxda multi-taabashada, ama aan taageeri laga yaabaa in dhaqdhaqaajinta jirka oo dhan.
Halkan waxaan ku sii wadi kuwii baaqa in faahfaahin ha iloobin keena Magic Mouse iyo trackpad idin la):
Just rogto aad Mouse Now!
Ma doonaysaa kor ama hoos aad dukumentigan in kitaabbadii? Markaas oo keliya u baahan tahay in aad sidaas oo kale sameeyaan oo aad Magic Mouse! Mac OS X 10.7 Libaaxa halkan ay ku taageerto Mouse Magic sida qalab multi-taabashada ah.
Haddaba ee waannu ku Noolaan digital lagu bilaabo waji kuwa oo daya sida ay wax yar laakiin si fiican u nolosheena beddesho,
Isticmaalka saddex farood,
Kabacdi Jidka toosan : dadban ilaa aad trackpad adigoo saddex farood oo qalab kala duwan oo la taabto, oo iyaga kor jiiday, ka dibna waxaad arki lahayd barnaamij kasta oo firfircoon aad Mac.
Afganbigii ay hab siman : Riix dhinaca kore ee midig ee suuqa ka furmay, waxaad arki doontaa shaashad buuxda ee codsiga. Oo weliba waxaad kaliya u baahan tahay inaad mari adigoo saddex farood oo qalab kala duwan oo la taabto iyo kuwa jiidaya inay bidix ama midig, oo aad u weecan doonta dhexeeya barnaamijyadooda firfircoon aad ku Mac ah. Si ay u tagaan si ay app hore, kaliya dhaqaaqo farahaaga in ay ka tageen, oo la mid ah ee soo socota, guuraan xaq.
Isticmaalka laba farood,
Boggan kor iyo hoos
Marka baararka kitaab ee Mac OS X Libaaxa waayay, maxaa yeelay, waxaad bixinta aragti fiican iyadoo la siinayo boos dheeraad ah u content ah daaqadaha 'si ay u muujiyaan, inay sameeyaan wax la mid ah waxa aad u dhaqmaan iyo ulihiisa gudban aad, hadda waxa kaliya ee aad u baahan simbiriirixan labada farood ama hoos trackpad si ay ugu rogto iyada oo loo marayo waraaqaha, websites, iyo in ka badan adigoo laba farood ku saabsan qalab kala duwan oo la taabto iyo jiidi faraha ilaa (rogto kor) ama hoos (hoos).
Characters aad u yar in ay akhriyaan? No si aad u hesho aragti dhaw ee website-ka? Markaas ka jaftaa aad multi-taabashada goobta laga heli karaa trackpad jeer oo waxaad awoodi doontaa inaad si weyneeyo page si deg deg ah. Ama wada iyo gelinayn labada farood markaas iyaga laga reebo dhaqaaqin Mozilla doonaa. Sidoo kale, labada farood gelinayn marka laga reebo iyagii ku soo wada barbaro Mozilla doona.
Weerar dadban ku hagayaan
Waa wax la mid ah oo la weeraray saddex farta siman kor ku soo sheegnay, waxaad halkan u dhaqaaqo kara labada farood horay iyo gadaal loo marayo bogagga internetka, pages document, iyo codsi kasta oo uu leeyahay qaab page of navigation ah.